Guul usoo Hoyatay Ardayda Soomaaliyeed
By ibrahim Aden shire November 01, 2017
Maanta waxaa lasoo daabacay Jaamadaha ugu tayada wanaagsan dalka Soomaaliya. In la helo liis tilmaamayo kala sarraynta jaamacadaha dalka waxay ahayd arin aan aad ugu ciil qabay, qalbigayna aan ka bixin ilaa 2015ki. Mar ayaan xataa ku fakaray inaan sameeyo shabakad howshaas u qunto laakiin waqtiga badan iyo qarashka badan ee ay u baahantahay ayaa iga horjogsaday inaan ku dhaqaaqo. In cid kale hadda isku daydana waan dhiiri galinayaa. Maxay muhiim u tahay in helo liiskaan?
In ay aqoonsi caalamai ah heleen ka sakow, aritaan waxay soo kordhinaysaa labo faaiido oo aad u muhiim u ah. Saaka marki aan arkay liiska waxaan filayay in kaalinta koowaad ay noqon doonto Cammud. Marki aan arki waayay waxaa qalbigayga kusoo dhacay tolow warkaan ma lagu kalsoonaan karaa? amay qolyo Soomaali ah oo qabiil ka buuxo qoreen iyo suaalo la mid ah.
Goor danbe oo aan eegay boggayga Facebook-ga waxaan arkay saaxiibo kale oo iyaguna yaabkaas soo qoray suaalo badanna ka keenay sababta Cammuud looga waayay liiska. Sababta yaabka nagu ridday ayaa ah in dadkeennu caan ku yahay meel ku dhag. Waxaan baranay in Cammuud ahayd jaamacad waa hore la aasaasay, dalka ugu tayo fiicnayd laakiin waxaanan xisaabta ku darsan in la fiicnaado ama la xagsado booska fiican inay dadaal u baahantahay dadka oo dhanna u furan tahay. sidaa darteed in lagaa dheereeyo ay suuragal tahay.
Faaiidada koowaad ee qiimayntaan ayaa ah in Jaamacaduhu ku tartamaan kaalimaha hore. Tartankaas wuxuu keeni in maamulayaashu qarash badan galiyaan horumarinta jaamacadda. faaiidada badan ee awal jeebka lagu shuban jiray iyo ardayda loo qoran jiray lacag kaliya ayaa meesha ka bixi. waxay fahmi in jiritoonkoodu ku xiranyahay haggaajinta tayada waxbarashadooda, ugu danbayna dalka iyo dadkuba way wada najixi.
Faaiidada labaad ayaa ah in ardaydu heli doonaan meel ay u noqdaan marki ay dooranayaan jaamacadda. Waxaa meesha ka bixi qaabka hadda aan ubadkeenna jaamacadaha ugu doorno oo ku dhisan waxa la yiri. Waxaan aqaan dad badan oo Xamar dagan ama aan ka fogayn oo caruurtooda u diro Cammuud iyagoo aaminsan inay tahay jaamacadda ugu wanaagsan dalka. Hadda waxa la heli doorasho xor ah oo la yaqaan sababta lagu doortay.
Inkastoo aysan ii suura galin inaan helo qaabka qiimaynta loo sameeyay iyo meelaha la eegay, hadana halkaan waxaan idin kula wadaagi meelaha laga fiiriyo tayada jaamacaha adduunka marki la is barbar dhigayo tayadooda.
1: Shuruudda Aqbalka: Sida ay u kala adag yihiin shurrdaha ardayda lagu qaato ayay u kala sarraysaa tayada jaamadaha. Jaamacadaha u furan lacagta waxay ka fakaraan siday ku heli lahyaan arday faro badan halka kuwa tayada ka fakara ay qaataan arday u qalanto jaamacaddooda oo ka bxii karto imtixaanadda adag ee ay dajistaan.
2: Tashiilaadka: Qalabka yaallo jaamacadda wuxuu muhiim u yahay waxbarashada ardayda. waxaa la eegaa buugta taal maktabka, kumbiyuutarada, Internetka, baaxadda maktabka iyo waqtiyada uu furanyahay iyo in ardaydu heli karaan wax walbo oo ka caawinayo waxbarshada. Jaamacad ardaydu iska sugto labo kumbiyuutar ama kuraasta maktabka la isu banneeyo ma gaari karto mid maktabkeedu habayn iyo maalinba furanyahay wax walbana yaallaan.
3: Saamiga arday-macalinka: Waxaa muhiim ah isu dheeli tirnaanta macalimiinta iyo ardayda. Jaamacadaha lacagaha u furan waxay qaataan arday tiro badan iyo macalimiin dhowr ah. Haddii macalimiintu yaryihiin waxaa meesha ka baxayo tayada waxbarshada waayo macalinka shaqada laga rabo waa mid faro badan. tusaale, haddii 150ki ardayba hal macalin kusoo aado waxaa dhacayso inuusan caawin kan hooseeyo, inuusan ka jawaaban emailadda ardaydu usoo diraan, inuusan ballan u samayn ardayki u baahan talo. Waayo waxaa uu ka badin karin diyaarinta casharada iyo sixidda imtixaannada.
4: Cimli-baarista: Cilmi baaristu aad ayay muhiim ugu tahay qiimaynta wax barashada sare. Haddii jaamacadu waqti iyo qarashba ku bixiso baarid waxay yeelanaysaa aqoon iyo waayo-aragnimo dheeraad ah waxayna wax kusoo kordhin nolosha aadanaha taaso ah sababta ugu muhiimsan ee marki horaba wax loo baranayay. Tayada cilmi-baarista ay jaamacaddu samayso sida ay u kala sarrayso ayay tayada guudna u kala sarrayn. waayo tayada baarista ayaa ku xiran cidda baaritaanka samaysay taasina waxay ka dhigantahay macalimiin fiican ayaa joogo.
5: Macalimiinta: Meelaha kale ee la eego waxaa ka mid ah aqoonta macalimiinta. imisa ayaa PHd ah imisa ayaa Master ah. Waayo aragnimo intee la eg ayay leeyihiin, horay baaritaanno ma u sameeyeen, iyo kuwo kale ayaa la is waydiiyaa.
6: Hantida jaamacadda: Waxaa muhiim ah oo iyaduna la eegaa in jaamacaddu lacag leedahay iyo inay faqri tahay. haddii jaamacaduu qani tahay waxay heli kartaa lacag badan oo ay ku maal galiso cilmi-baaris, waxay sidoo kale dooran kartaa macalimiin qiimo badan. Laakiin haddii ay faqiir tahay wixii laga tagay waxaan ahayn ma awooddo.
Liisku intaas waa ka dheer yahay oo waxaa ku jiro sida ardayda kasoo baxdo shaqo u helaan, sida ardayda dhigato u arkaan tayada jaamacadda iyo kuwo kale, laakiin inta aan kor ku xusay ayaa ugu muhiimsan innaguna aan ku soo gaabinaynaa.